Shiinaha Wareegsan Xidhitaanka Wareegyada Wareejinta Wareegga / Evaporative Wareegtada Wareegyada Soo-saareyaasha iyo Soo-saare | Yubing
Noocyada qulqulka qulqulka qulqulka munaaradaha qaboojinta:
Ku habboon Dayactirka
Qaab-dhismeedka naqshadeynta bini-aadamnimada oo leh albaab laga soo galo culeyskiisu aad u weyn yahay (oo la xiri karo) iyo meel gudaha ah oo ku filan, shaqaalaha dayactirka ayaa si ku habboon u geli kara gudaha munaaradda si maalin walba loo kormeero loona dayactiro iyadoo aan loo eegin qalabka socda ama uu xirmayo.
Ka hortagga miisaanka
Hawo qalalan oo qabow iyo qulqulka biyaha socodka waddo is barbar socda awgood, dusha sare ee tuubada ayaa gabi ahaanba biyo xereen lagu buufiyey si looga fogaado meel kasta oo qalalan taas oo u horseedi doonta lacag dhigid. Heerkulka biyaha lagu buufiyona wuu ka hooseeyaa heerkulka miisaanka oo waliba si weyn u yareeya miisaanka.
Waxqabadka Isdhaafsiga Kuleylka Wanaagsan
Wareegtada iskutallaabtu waxay xirxireysaa qaboojiyaha tiknoolajiyad isku dhafan oo ah gariiradda iyo walxaha loogu talagalay diidmada kuleylka taas oo hagaajineysa meelaha wareejinta kuleylka si loo hagaajiyo waxtarka nidaamka.
ICE Evaporative-socodka qulqulka qaboojiyaha wareegga 'qaab dhismeedka iyo qaybaha muhiimka ah hordhaca:
Hawada iyo biyaha dariiqa is barbar socda awgood, waxay awood u leedahay inay kormeerto oo ay dayactirto inta ay socoto howsha.
Meeldhexaadka ah (gariiradda)
Lagu sameeyay bir birta ah oo tayo sare leh oo 304 ah oo loo qoondeeyay loona gudbay 3 jeer cabirka cadaadiska 2.5Mpa si loo hubiyo waxqabadka.
Waa ikhtiyaar ikhtiyaari ah oo loogu talagalay dib-u-xisaabinta daaweynta biyaha.
Waxaa la dhisay oo laga sameeyay PVC si loo yareeyo heerkulka biyaha buufinta ee ka fogaan doona cabirka iyo buuxinta dhab ahaantii waxay kordhineysaa waxtarka nidaamka iyadoo la yareynayo isticmaalka biyaha iyadoo la adeegsanayo qaab kuleyl wanaagsan oo lagu wareejiyo.
Qaboojiyeyaasha ICE oo ku qalabeysan mashiin farsamo leh oo shaabadaysan.
Naqshadeynta jiirada (u janjeedho dhanka bixitaanka wasakhda wasakhaysan) iyo miiraha birta birta ah ayaa hagaajin doona qulqulka qulqulka wasakhda iyo wasakhda ayaa isla mar ahaantaa nadiifisa wasakhda iyo wasakhda weelka ku jirta.
Hore: Dhismayaasha Qaboojinta ee Qabsashada leh oo Muuqaal ahaan Leh
Xiga: Wareegyada Wareegsan ee Wareegyada Qaboojinta Wareegtada / Qaboojiyaha Xirmooyinka Wareegga Uumiga
Halbeegyada Farsamada ee Wareegga Wareejinta Wareegga Wareegga
m3 / saac
socodka-socodka meertada qaboojiye xiran
Wareegga Wareejinta Wareegga Wareegga Wareegga